अमेरिकामा त्यतिबेलाको र अहिलेको दशैँ – MySansar
अमेरिकामा त्यतिबेलाको र अहिलेको दशैँ
Posted on October 1, 2014 October 1, 2014 by mysansar
ति अतितका दिनहरु समझदा आजपनि कहाली लागेर आउछ । खै कस्तो ठाउ र सहरमा आएर बसिएछ त्यसबेला । त्यसबेला आफु आएर बसेको अमेरिकाको एउटा सानो राज्य रोड आइलेण्डको पनि एउटा सानो सहर इस्ट ग्रीनवीच जहाँ सात महिना सम्म पनि तेश्रो नेपाली देख्न पाइएन।
अमेरिकाको सबैभन्दा सानो क्षेत्रफल भएको र आठौ थोरै जनसख्या भएको राज्यमा कसरि सात महिना बिताइयो अहिले सोच्दा पनि अचम्म लाग्छ । हुन् त् यो राज्यको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व छ , ब्रिटिश साम्राज्यबाट ४ मई १७७६मा स्वतंत्र हुने पहिलो र सानो राज्य हो रोड आइल्याण्ड । अमेरिकी हरेक राज्यको आफ्नै एउटा बिसिस्त पहिचान सहितको नाम छ जस्तै क्यालिफोर्नियालाई “Golden State”स्वर्ण राज्य भनिन्छ भने यसलाई “The Ocean State”, समुद्री राज्य भनिन्छ। यसको पश्चिममा कनेक्टिकट र उत्तर र पूर्बमा मासाचुसेट राज्य अवस्तित छ। यसको कुल क्षेत्रफलको १४ प्रतिशत समुद्री सिमाना ओगटेको छ र न्यू योर्कको लांग बीच सित दक्षिण पश्चिमी भूभागको सिमाना सित जोडिएको छ। आफु बसेको इस्ट ग्रीनवीच राज्यको मध्यभागमा एउटा पुरानो सहरको रुपमा अवस्थित थियो जसको जनसंख्या २०१० मा पनि मात्र तेरह हजारको हाराहारीमा छ, जबकि हामि हालै बसेको यस उत्तरी क्यालिफोर्नियामा अनुमानित १५,००० नेपाली रहेको अस्पुस्ट जानकारी छ । त्यस्तो स्थानमा अर्को नेपाली परिवार पाउनुत वास्तवमै असम्भव लाग्थ्यो। सायद अहिले धेरै नेपालीहरु पुगी सके होलान बिसेष गरेर प्रोभिड़ेन्समा केहि नेपाली बिद्यार्थी र परिवार रहेको थियो जुन अहिले बढेर धेरै भएको हुनु पर्छ।
एक दिन अचानक खै के सोच आयो मैले दाइलाई भने, “ हैन यसरि यस्तो ठाउमा कसरि कति दिन के को लागि बस्ने जाउ अन्तै भन्दा वहा मुसुक्क हास्नु भयो र “ल सुतौ आज भोलि यसबारेमा कुरा गरौला ”, भन्दै बत्ति निभाएर मलाइ पनि सुत्ने आदेस दिनु भयो। तर मलाइ भने बिहान पख सम्म पनि निन्द्रा लागेन बाहिर चिसो बतास संगै त्यस बर्षको हिमपात सुरु भै सकेको थियो। अह भोलि निर्णय गरेरै छोड्छु बरु एक्लै जान परे पनि जान्छु यो आतेस लाग्दो ठाउमा जत्तिनै राम्रो काम र दाम भएपनि बस्दै बस्दिन , एक बस्दिन, दुइ बस्दिन तीन. अचानक पल्लो कोठाबाट आवाज आयो “हन के भयो ? कहाँ बस्दिन भनेको ? किन नसुतेर रातभरी बर्बराएको ? भन्दै दाई कोठामा मा आउनु भयो र आफुलाई पनि निन्द्रा नलागेको जानकारी गराउनु भयो। म उठेर ए त्यसो हो भने कफी पिउ भन्दै किचेनमा गएर कफी बनाउन थाले र घडी हेरेको चार बज्नै लागेछ , ए बिहान पो हुन आटेछ भन्दै कफी को चुस्की लिदै मैले सोधे, “ अनि के गर्ने जाने होइन ?”
अचानक मलाइ फोन उठाएर क्यालिफोर्निया फोन गर्न मनलाग्यो जहाँ आफ्नै गाउको चिनेका दाईहरु हुनुहुन्थ्यो ल एकछिन है अहिले क्यालिफोर्नियामा त सात बजिसक्यो दाई उठिसक्नु भयोहोला एसो हाइ हल्लो गरौ बरु, भन्दै फोन गर्न थाले , कुरा कुरैमा उताबाट हरियो सिग्नल आयो , “ ल आउने हो भने आऊन त मेरोमा बस्दा भै हाल्यो काम भने जत्ति पाइन्छ नेपालीहरु पनि फाट्ट फुट्ट भेटिन्छन यहा। तिमि बसेको जस्तो होइन फेरि हिउपनि पर्दैन”, भन्दै धेरै बेर सम्म कुरा भयो र मैले भने, “ ल भरे फोन गरेर टुंगो गर्छु है !” भनेर फोन राखी दिए।
[यो ब्लग माइसंसारको पाठकबाट आएर बिना सम्पादन जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको हो। तपाईँ पनि आफ्नो ब्लग माइसंसारका पाठकमाझ बाँड्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेर पठाउनुस्]
3 thoughts on “अमेरिकामा त्यतिबेलाको र अहिलेको दशैँ”
देश विदेश रहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजु वाई दिदीबहिनी इस्टमित्र हरु मा बडा दशैं २०७१ को उपलाक्छ्यामा हार्दिक बधाई तक्रायुछु. जो जहाँ रहे पनि खुशी साथ रहुँ खुशी साथ बचौ.
गफ्फ हान्ने नि हद हुन्छ नि. इस्ट कोस्ट मा बिहान को ४ बजे नि कहिँ कैलिफोर्निया को ७ बज्छ? बिहान को १ पो बज्छ त.
भाइ, यो दशैंको बारेमा लेखिएको लेख हो कि आफ्नो अमेरिका बसेको बढी बढाई अलिक घुमाउरो पाराले ठोकेको हो ? यो गरें, ऊ गरें, यता गएँ, उता गएँ …..यति घुमे, कत्ति घुमे, यस्तै राम-कहानी पो रैछ | जे होस्, सरसर्ती पढियो तर खास कुरा के भन्न खोजेको बुझ्न सकिएन |